Toddobaadkii hore waxaan joogay dalka Holland. Waxaan isu maray dhowr magaalo oo dalkaas ku yaalla oo Soomaalidu si xoog leh ay u deggan yihiin. Waxaa indhahayga soo jiitay sida miyir la'aanta ah ee loogu talax-tagay cunista Qaadka. Dad badan, Qaadku waxa uu u yahay wax ay ku marxabeysiiyaan dareenkooda, kuwa kalena waxa ay sheegaan inay isaga ilaaliyaan welwelka iyo walaaca.
Magaalada the Hague (Den Haag), waa meesha la oran karo waxa ay xarun u tahay Qaadka yimaadda Holland ee laga keeno Afrika. Xilli duhur ah ama galab ah haddaad joogto magaalada waxaad garwaaqsanaysaa in Soomaalida badankood aysan ka muuqan degenaan iyo xasilooni.
QAADKA vs SUUGAANTA
"Xilligan oo kale dadku dhego la qabto ma leh," sidaas waxaa yiri Cabdi-xamiid Cusmaan oo hor taagan maqaayadda Soomaalida ee Xamar-Cadde. Dadka Qaadka gada ma lahan meelo cayiman oo u furan oo ay qaadkooda ku gataan. Sida badan, qaadwaleyaashu waxa uu mid kasta qaadkiisa ku iibiyaa dhinaca dambe ee gaarigiisa. Axmed Xasan ayaan weydiiyey falsafadda ka dambaysa qaabkan, waxaana uu ii sheegay inay sidan uga sahlan tahay in meel toos ah qaadka loo cayimo, walow ay jiraan ayuu yiri mararka qaar in lagu iibiyo goobaha lagu qayilo.
Waxaan kaloo tagay magaalada Utrecht. Waa magaalo aad ay ugu badan yihiin Soomaalidu. Waxaa dhowr meelood ku kala yaalla dukaamo Soomaali leedahay oo iibiya badeedo kala duwan iyo goob Qaadka lagu gado. Bannaanka dukaan magaalada ku yaalla ayaan qof la taagnaa markii ay nagu soo leexdeen dad badan oo Soomaali ah oo na weydiiyey in qaad cusubi yimid iyo in kale.
Anigoo taas la yaabban ayaan imidday magaalada Nijmegen oo ku taalla meel u dhow xuduudda Germany iyo Holland. Saaxiibkey Yuusuf Maxamed Cabdi ayaa i kexeeyey, si uu ii soo tuso marfash Qaad lagu iibiyo oo magaalada ku yaalla (Marfash waxaa Europe looga yaqaannaa goobaha qaadka lagu cuno, laguna gado).
Waxaan tagnay meel parking baabuurta ah oo gawaarida la dhigto oo dhirtu ku badan tahay. Xoogaa magaalada waa ay ka soo baxsan tahay, waxaana yiillay ugu yaraan 15 gaari. Rag Soomaali ah ayaa fadhiyey oo qaad afka ku hayey. Cabdi Yare oo ka mid ah dhallinyarada meeshan qaadka ku iibisa ayaa igu yiri "goobtan waxaa la yiraahdaa Fadhi-Wanaag, waxaana noo soo raray police-ka markay u adkeysan waayeen buuqa iyo sawaxanka aan ku hayno magaalada dhexdeeda marka qaadku yimaddo."
Waxa uu farta ku fiiqay in police-ka ay derseen oo ay fahmeen in Soomaalidu dhaqan ahaan u leedahay in badeecadahooda ay bannaanka ku gataan. "Qof kasta oo halkan jooga waxaa fadhi u ah gaarigiisa" ayuu yiri Cabdi Yare. Muddo yar oo aan meesha joogay waxaa ii muuqatay in geedaha hoostooda ay u isticmaalayeen goobo ay ku leyrsadaan. "Xilliga kuleylaha bannaanka ayaan u soo baxnaa, xilliga qaboobahana gawaarida dhexdooda" ayuu yiri:
Soomaalida Holland ka sokow Qaadka waxa ay caan ku yihiin isticmaalka shiishadda ama badeecadda oo loo dhuuqo sida sigaarka oo kale. Shiishadda waxaa meelaha aadka looga isticmaalo ka mid ah Djibouti, Dubai iyo London.
Faafin: SomaliTalk.com | Aug 17, 2004
BOGGA MAQAALADA DADWEYNAHA.... GUJI